HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirTilmaamaha Qaranka ee 'HTT' waa in lagu soo saaro Eskişehir
26 / 11 / 2019 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Xirmooyinka yht waa in lagu soo saaro Eskisehir
Tilmaamaha Qaranka ee 'HTT' waa in lagu soo saaraa Eskişehir; Gudoomiyaha EOSB Nadir Küpeli wuxuu booqday maareeyaha guud ee TÜLOMSAŞ Hayri Avcı wuxuuna sheegay in tareen xawaare sare leh ay tahay in laga soo saaro Eskişehir.
Eskişehir Abaabul Aaga Wershadaha (EOSB) Nadir Küpeli, gudoomiye kuxigeenka Metin Saraç, Member Hamza Tınas iyo Maareeyaha Gobolka Erhan Tatar; Turkey tareenka iyo Engine Industry Inc. (TÜLOMSAŞ) Maareeyaha Guud Hayri Avcı xafiiskiisa. Duqa magaalada Küpeli wuxuu sheegay in tareen xawaare sare leh ay tahay in laga soo saaro Eskişehir wuxuuna yiri: ÜL TÜLOMSAŞ aad ayey u guuleysteen. Gaar ahaan, hal-ku-dhegga laga gaadhay sannadihii 10 sano ee la soo dhaafay waa inaanu lumin. Gawaarida tareenka xawaaraha sare leh waa inay soosaartaa TÜLOMSAŞ. Aag warshadeed oo abaabulan iyo TÜLOMSAŞ maxay yihiin tillaabooyinka la taaban karo ee la qaadi karo si loo soo saaro noocyadan magaaladayada, iyo waxa laga qaban doono. Halkaan waxaan ku aragnaa dadaalladaada daacad ah. Geedi socodka soosocda, waxaan idin kula joognaa garoon kasto oo kuyaala Ankara iyo Eskişehir. Waxaan diyaar u nahay inaan isticmaalno tas-hiilaadka uu sharcigu bixiyo. Waxaan had iyo jeer kula joognaa inaan soo saarno barnaamijyadan TULOMSAS ee Eskisehir. Kaliya waxaan rabnaa magaalada; Maal-gashi ha yimaado dalkan. Soosaarista qaybo ka mid ah Eskişehir ayaa ka faa'iideysan doona qof walba laga bilaabo 7 illaa 70. ”
Jadwalka tareenka xawaare sare leh waa in lagu soo saaraa eskisehir
Waxaan nahay hay'adda ugufiican wax soo saarka YHT
Isagoo muujinaya sida uu ugu qanacsan yahay booqashada, Agaasime Avcı wuxuu siiyay warbixin ku saabsan howlaha ay qabatay TÜLOMSAŞ wuxuuna yiri: "TÜLOMSAŞ waxay ku guuleysatay inay fuliso dhowr mashruuc oo aqoon leh. Waxaan dhammeynay soosaaridii Locomotives qaran ee Diesel Electric Maneuver Locomotives. Waxaan ka bilownay Mashruuca E5000, kii ugu horreeyay ee heer qaran ah iyo Kan Gudaha ah ee Korantada Kireynta Korantada TSI Shahaadada. Soosaarida xeradan, dalkeenu wuxuu lahaan doonaa astaamaha sumadda TÜLOMSAŞ oo waxaan rajeyneynaa inaan la kulanno aaggayaga xNUMX. Waxaan dhammeynay soo-saarkii 'Hybrid Maneuvering Locomotive', oo aan ku galnay tirada ugu badan ee adduunka adduunka markii la bilaabay hordhaca adeegga ganacsiga. Si aan ula soconno tikniyoolajiyadda hadda iyo mustaqbalka ee qaybta Nidaamka Tareenka, waxaan bilownay waxqabadyo Isbeddello Digital ah oo ajendaha u ah adduunka oo dhan. Mashaariicda sida Nidaamka Korjoogteynta Gaari-socodka ah ee TÜLOMSAŞ ayaa hadda la fulinayaa. Habka ugu habboon ee waxsoosaarka loo yaqaan 'YHT' adduunka oo dhan waa hay'adihii khibrad u leh wax soo saarka jaangooyada hoose. Waxaa loo arkaa in shirkadaha wax soo saarka ee loo yaqaan 'NYT' ay horey u soo saareen jaangooyooyin ay ku jiraan dhulal la mid ah. TÜLOMSAŞ waa shirkadda ugu wanaagsan ee wax soosaarka loo yaqaan "YHT" maaddaama ay tahay shirkadda keliya ee soosaarayaasha duulista ah ee dalkeenna ku taal. Mashruucyo badan oo iskaashi ah oo lala leeyahay shirkadaha gudaha iyo dibedda ayaa si guul leh lagu xaqiijiyey oo looga ganacsadey khibradaha TÜLOMSAŞ illaa iyo hadda. ”
Kaabayaasheena waa diyaar
Sida TÜLOMSAŞ, Avcı wuxuu sheegay in kaabayaashoodu ay diyaar u yihiin inay soo saaraan jaangooyooyin xawaare sare leh oo wuxuu yiri, Avcı Waxaan si firfircoon ula dhaqmeynaa R&D iyo nashaadaadka cusub khabiiro iyo karti shaqo oo aqoon leh. Waxaan nahay xaruntii R&D ee ugu horreysay oo lagu aasaasay waaxda dowladda. Waxaan leenahay kaabayaasha lagama maarmaanka u ah inaan soo saarno jadwal tareen xawaare sare leh marka loo eego shaqaalaheena aqoonta u leh, sii wadida iyo howlaha R&D. Annaga, haddaan nahay TÜLOMSA are, waxaan diyaar u nahay inaan soo saarno jaangooyooyin xawaare sare leh ”.
Booqashada ayaa sidoo kale isweydaarsatay aragtiyo ku saabsan faa'iidooyinka wadada isku xirka tareenka ee u dhexeeya Hasanbey Logistics Center iyo aagga wershadaha abaabulay ee OIZ iyo TÜLOMSAŞ.
Eskisehir Konya YHT Qeybo Arrimo ah ayaa yimid
rinjiga sumurud YHT helin nooc loo doortay dalka Turkiga
Ogeysiiska Qandaraaska: Adeegga dayactirka dayactirka oo ay ku jiraan qalab loogu talagalay qalabka YHT ayaa la qaadi doonaa
Ogeysiis Qandaraasle ah: Badeecadda muraayadda ee loogu talagalay 65000 Type Type YHT
Ogeysiiska Qaanuunka: Daboolka xarkaha iyo rooga waxaa lagu iibsan doonaa 65000 Nooca Yeyt…
Ogeysiiska Ugaarsiga: Daboolka kursi iyo rooga waxaa lagu iibsan doonaa looguna talagalay 'YHT'
Ugu yaraan Boqolkiiba 51 Shuruudaha Gudaha waxaa lagu magacaabi doonaa New HHT Qaybaha
Ogeysiiska Ugaarsiga: Adeegga Dayactirka iyo Dayactirka ee loogu talagalay loo yaqaan 'YHT'
korontada nalalka korontada fiilada
Muuqaalka Korantada Gawaarida E5000
Xarunta Saadka ee Hasanbey
Locomotive Hyane Maneuvering Loading
Diyaarinta HHT Qaranka
TULOMSAS gogol xawaare sare leh
Wax soo saarka YHT